INkcubeko Yonyaka weNtshonalanga
Umnyaka omtsha waseTshayina uyimicimbi ebalulekileyo yeNkcubeko
Umnyaka omtsha waseTshayina iholide ebalulekileyo kwisiko lesiShayina. E-China iholidi iyaziwa ngokuba yi "Spring Festival" njengoko ibonisa ukuphela kwexesha lebusika. Unyaka omtsha waseTshayina uqala ngosuku lokuqala lwenyanga yokuqala kwikhalenda yeTshayina kwaye iphelela kwiintsuku ezingama-15 kamva kwinto eyaziwa ngokuba yiLangtern Festival.
Imvelaphi yoNyaka omtsha waseTshayina ayikaziwa ngokupheleleyo njengokuba umlandelwa uchaza ukuqala kweeholide ukuhluka ngokusekelwe kumdlali webali.
NgokweSayithi lethu leNkcubeko yaseChina , onke amabali afaka i-monster eyayixela abantu baseTshayina ababebizwa ngokuthi yiNian (igama lesiTshayina elithi "unyaka"). I-Nian nayo ibonakala njengengonyama kumabali amaninzi oko kutheni i-Chinese New Year's parades ibandakanya iingonyama.
Iimbali zithi umntu onobudala ucebisa abantu basekuhlaleni ukuba bayesabise i-Nian ngokumemeza ngokukrakra ngamacwecwe kunye neengqungqelo kwaye baxube amaphepha abo abomvu kwiingcango zabo kuba u-Nian uyesaba obomvu. Ngokomthetho abantu balapho bathatha icebiso lendoda baza bahlula i-Nian. AmaTshayina ayawubona umhla wokunqoba kukaNian ngexesha elifanayo ngoNyaka Omtsha waseShayina.
Umhla woNyaka omtsha waseTshayina
Umhla woNyaka omtsha waseTshayina usekelwe kwikhalenda yenyanga kwaye oko kuguquka minyaka yonke. Ikhalenda yeenyanga isebenzisa umjikelezo wenyanga malunga noMhlaba ukugqiba imihla. Ngokusekelwe kule khalenda, uNyaka omtsha weTshayina uyawa ngenyanga yesibini emva kwenyanga yebusika okanye kwindawo ethile phakathi kukaJanuwari 21 noFebhuwari 19 kwikhalenda kaGregory .
Imithendeleko iqala iintsuku ezingama-15 phambi komhla wokuNyaka omtsha.
Umnyaka omtsha waseTshayina ubalulekile nakwinkcubeko yaseTshayina kuba ngaphezu kokuqala unyaka omtsha, iholide ibonisa ukuqala kwesilwanyana esitsha kulo nyaka. Unyaka ngamnye wekhalenda yeTshayina ubizwa ngokuba ngumnye wezilwanyana ezi-12 kunye neminyaka iwela kwiminyaka engama-12 kunye nezilwanyana.
Umzekelo, unyaka ka-2012 wawungumnyaka wenjoka ngo-2013 wawungumnyaka wenyoka kunye no-2014 wawungumnyaka wehashe. Ngamanye kwezi zilwanyana zinempawu ezahlukileyo zobuntu kwaye zithetha izinto ezahlukeneyo kwiminyaka abameleyo kwaye ii-horoscopes zaseTshayina zisekelwe kwisiphi isilwanyana somntu. Inyoka, ngokomzekelo, iyakuthandeka, i-gregarious, i-introverted, ivulekile kwaye ihlakaniphile.
Iintsuku ezili-15 zeMithendeleko
Unyaka omtsha waseTshayina uhlala iintsuku ezili-15 kwaye ngalunye usuku luhlobo oluthile lwemithendeleko edibene nayo. Usuku lokuqala loNyaka omtsha waseTshayina ngumhla wokufumana oothixo kunye neentsapho zokuhlonipha abadala. Imibhiyozo iyaqala phakathi kobusuku kwaye kuqhelekile ukukhanya komlilo kunye nezixhobo zokutshisa umlilo kunye nokutshisa ama-bamboo stick (i-Wikipedia).
Kukho iminye imikhosi eyahlukeneyo kwiintsuku ezilandelayo ukuqala koNyaka omtsha waseTshayina. Ezinye zazo ziquka iintombi ezitshatileyo zivakashele abazali (usuku lwesibini), abaphathi bezonka kunye nezidlo zokubonga abasebenzi ngomsebenzi wabo kunyaka (ngokuqhelekileyo ngosuku lwesibhozo) kunye nabaninzi beentsapho zokudla.
Ngomhla weshumi elinesihlanu ngowokuqala ukunyangwa kweNew Year yaseTshayina kunye noMkhosi weLangtern. Njengenxalenye yalo mthendeleko, iintsapho zidibanisa ukutya kwaye emva koko zihamba ezitalatweni zizibane ezihlotshisiwe kunye / okanye zixhomeke emakhaya abo.
Umkhosi weLangtern uquka umdaniso wenkamba kunye nakwezinye iindawo zehlabathi, izibonda kunye nezibane ezininzi kunye nezixhobo zomlilo kunye nezixhobo zomlilo.
Iimpawu zoNyaka omtsha waseTshayina
Inxalenye enkulu yeSigqeba esitsha seTshayina ixhomekeke kwimikhwa yendabuko efana nokusetyenziswa kweemvulophu ezibomvu zokutshintshiselana ngesipho, ukugqoka iimpahla ezibomvu, izixhobo zomlilo, ukusetyenziswa kweentyantyambo ezithile kwiimpawu zentyatyambo kunye nomdaniso wodrajo.
Iimvulophu ezibomvu okanye iipakethi ezibomvu zinikezelwa ngokuqhelekileyo ngexesha lokubhiyozela uNyaka omtsha waseTshayina kwaye ngokuqhelekileyo ziqulethe imali enikeziweyo kwimali. Amapakethi adluliselwa kumabhangqwana abadala ukuya kubantwana nakwabadala. Ukugqoka iingubo ezibomvu kubalulekile nakwixesha lexesha ngenxa yokuba kukholelwa ukuba umbala wubomvu obomvu kwiimoya emibi kunye nenzuzo embi. Abantu banxiba iimpahla ezintsha ngexesha le mi bhiyozo ukufuzisela ukuqala komnyaka omtsha.
Imisebenzi yomlilo kunye ne-firecrackers yinye inxalenye ebalulekileyo yoNyaka omtsha waseTshayina kuba, njengokusetyenziswa kwebomvu, kukholelwa ukuba izandi ezivakalayo ezenzayo ziya kuthusa imimoya emibi. Nangona kunjalo, kwiindawo ezininzi zehlabathi, i-pyrotechnics ayivumelekanga okanye ayivumelekile ngenxa yengozi kunye neengozi zomlilo.
Amalungiselelo e-Floral ayenzeka ngexesha loNyaka Omtsha waseTshayina, kodwa kukho iintyatyambo ezithile ezisetyenziswe kaninzi kunabanye ngezizathu ezingokomqondiso. Ngokomzekelo, iintyatyambo zeplumfu zifuzisela inhlanhla, ngelixa i-kumquat ifanekisela ukuchuma kunye ne-eggplant iya kuphilisa izifo.
Ekugqibeleni, udumo lweentambo luyinxalenye ebalulekileyo kuyo yonke imibhiyozo yoNyaka omtsha waseTshayina. Kukholelwa ukuba le midaniso kunye neendwangu ezinkulu zedrama iya kugxotha imimoya emibi.
Imibhiyozo yoNyaka omtsha waseShayina Ehlabathini
Nangona uNyaka omtsha weTshayina ugubha kakhulu kwiChina nakwezinye iindawo zaseAsia, kukho imibhiyozo emikhulu kwiidolophu ezijikeleze ihlabathi kunye nabantu baseTshayina. I-San Francisco, eCalifornia yaziwa ngokuba yiChinatown kunye neParade yeNtshonalanga entsha enkulu yeTshayina kunye nemikhosi ngamnye ngonyaka. Ezinye iidolophu zibandakanya nemibhiyozo emikhulu yaseNtshonalanga yoNyaka iquka iSan Francisco, eCalifornia neNew York City, eNew York e-United States, eVancouver, eBritish Columbia naseToronto, e-Ontario eCanada kunye neSydney, e-Australia kunye ne-Wellington, eNew Zealand egama ezimbalwa.
Ukuze ufunde kabanzi malunga neChina ndifunde isihloko sam esibizwa ngokuba yiJografi neYamhlanje yeChina .
Ngaba i-Dinosaurs yayishushu-gazi?
Indlela yokusebenzisa i-Adverb yesiFrentshi 'Enfin' ('Ekugqibeleni, ekugqibeleni')